यो कसरी काम गर्दछ? अनलाइन कम्पनी निर्माण FiduLink साथ
म दर्ता लगइन गर्नुहोस्
तपाईको कम्पनी निर्माणको क्षेत्राधिकार छनौट गर्नुहोस् Fidu प्लेटफर्ममा उपलब्ध contin महादेशहरूमालिङ्क। देश छनौट गर्नुहोस् र Fidu बजारको चरणहरू अनुसरण गरेर तपाईंको अर्डर अनलाइन पुष्टि गर्नुहोस्लिङ्क। यो चरणले तपाइँको नयाँ फिडू सल्लाहकारलाई सूचित गर्दछलिङ्क (स्थानीय वकिल, स्थानीय लेखाकार, स्थानीय वकिल) तपाईंको अर्डर को।
तपाइँको अनलाइन कम्पनी निर्माण अनुरोध सम्बन्धित कागजात संलग्न गर्न नबिर्सनुहोस् (एक प्रयोगकर्ता गाईड तपाइँको डाउनलोड अर्डर को प्रमाणीकरण मा तपाइँलाई दिईनेछ) (पृष्ठमा कागजातहरूको सूची)
कम्पनी को गठन
ऐनको कानूनी फीस पंजीकरण
तपाईंको Fidu एजेन्टलिङ्क तपाइँको व्यवसाय निर्माण अनुरोध समर्थन गर्दछ। तपाईको सल्लाहकारले तपाईले लि selected्क पठाउनुहुनेछ इलेक्ट्रोनिक कम्पनी निर्माण फारम जुन तपाइँले चयन गर्नुभयो। यस चरणको बखत तपाईंलाई आफ्नो पहिचान कागजातहरू प्रदान गर्नुपर्नेछ (समान चीज यदि तपाईंसँग साथीहरू छन् भने)।
हाम्रो ग्राहकहरू र तिनीहरूका सहयोगीहरू वा लगानीकर्ताहरूको लागि हाम्रो डाटा र पहिचान सुरक्षा कार्यक्रमको अंशको रूपमा, नोटरी जनताद्वारा कागजातहरूको प्रमाणीकरण अनिवार्य छ। सबै कम्पनी निर्माण प्रक्रियाहरू फिडू वकीलहरू द्वारा गरिन्छलिङ्क, Fidu वकिलहरूलिङ्क र वा फिडू लेखाकारलिङ्क परिसर।
पूर्ण गोपनीयता भनेको तपाईंको अनलाईन व्यापार निर्माण सेवाहरूको लागि उत्तम दरहरूमा पहुँच हो। Fiduलिङ्क सबै यसको Fidu Jurists सोध्नुहोस्लिङ्क , Fidu वकीलहरूलिङ्क , Fidu लेखाकारलिङ्क सेवाहरू र सुविधाहरूको एक पूर्ण गोपनीयता प्रदान गर्न स्टाफ हो।
सबै कम्पनी निर्माण प्रक्रियाको बखत तपाईंलाई प्रक्रियाहरूको प्रगतिको सल्लाहकारका साथै तपाईंको कम्पनीको बारेमा सबै अनुरोधहरूको सूचना दिइनेछ।
आफ्नो कम्पनी तयार छ !
अफ्रिकाका J 47 न्यायालयहरू हेर्नुहोस्
अफ्रिकामा देशहरूको सूची हेर्नुहोस् म ऑनलाइन समाज सिर्जना गर्छु
एशियाका २१ वटा न्यायालय हेर्नुहोस्
एशियामा देशहरूको सूची हेर्नुहोस् म अनलाइन समाज सिर्जना गर्दछु
अमेरिकामा २ 23 न्यायालयहरू हेर्नुहोस्
अमेरिकामा देशहरूको सूची हेर्नुहोस् म अमेरिकामा ऑनलाइन समाज सिर्जना गर्दछु
यूरोपमा J२ न्यायालयहरू हेर्नुहोस्
यूरोपमा देशहरूको सूची हेर्नुहोस् म युरोपको सोसायटी अनलाइन सिर्जना गर्छु
ओसानियामा J न्यायालयहरू हेर्नुहोस्
ओशियानियामा देशहरूको सूची हेर्नुहोस् म अनलाईन सोसाइटी ओशियानिया बनाउँछु
टाढाको कम्पनीको निर्माण प्रदान गर्न कागजातहरूको सूची
इथेरियम (ETH) $ 2,085.82
NBB (NBB) $ 307.41
XRP $ 0.432606
कार्डानो (एडीए) $ 0.58151
सोलाना (SOL) $ 56.33